Alote Myanmar - မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် Construction, Building, Architecture အလုပ်အကိုင်များ
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်, တည်ဆောက်ရေး, ဗိသုကာ Jobs in Myanmar
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်, တည်ဆောက်ရေး, ဗိသုကာ အလုပ် 46 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
ရန်ကုန်၊မန္တလေးရှိမြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်, တည်ဆောက်ရေး, ဗိသုကာ ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများကို Alote Myanmar တွင်ဝင်ရောက်ရှာဖွေလျှောက်ထားလိုက်ပါ။
- confirm asset, liability, revenue, and expenses entriesများကိုစုစည်းပြီး Double Check ပြုလုပ်၍ အကောင့်အချက်အလက်များကို analysisပြုလုပ်ရမည်။ - subsidiary accountများကို verifying, allocating, posting, reconciling transactionsပြုလုပ်ပြီးထိန်းသိမ်းချိန်ညှိ၍ ကွဲလွဲမှုများကို ဖြေရှင်းရမည်။ - subsidiary accountများပြောင်းလွှဲခြင်း၊ Trial Balanceများပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် Entriesများညှိနှိုင်းခြင်းဖြင့် General Ledgerကိုထိန်းသိမ်းရမည်။ - အချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်း၊ Balance Sheetပြင်ဆင်ခြင်း၊ Profit and Lost နှင့် တခြား statementများ ဆောင်ရွက်၍ financial status ကိုအကျဉ်းချုပ်ရမည်။ - Secures financial information by completing database backups - Protects organization's value by keeping information confidential - Reporting of relevant account information to management
- နေပြည်တော်ရုံးခ်ဳပ္ရွိ ကိုရီးယား ဝန်ထမ်းများအတွက် အစားအသောက်များ ချက်ပြုတ်ရမည်။ - တစ္ရက္လွ်င္ ကိုရီးယားအစားအစာ ၃ နပ်ကိုချက်ပြုတ်ရမည်။ - eventပွဲများအတွက် အထူးအစားအစာပြင်ဆင်ရမည်။ - Food ingredientsများဝယ်ယူခြင်း သိမ်းဆည်းခြင်းများပြုလုပ်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: - Bonus - ဖုန်းပက်ကေ့ချ် - ပြည်ပသွားရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်မည့်အခွင့်အရေး - ဝန်ထမ်းများအတွက် Welfare events များ - ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးစံနှုန်းဖြင့်OT ကြ
Alexander Design & Construction
- ရန်ကုန်ရှိ Site များတွင် သွား ရောက်လုပ်ကိုင်ရမည် - Civil works များကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ ကြီးကြပ်နိုင်ရမည် - ရုံးမှ ညွန်ကြားချက်များကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည် – လုပ်ငန်းခွင် site အချိန်ဇယားများကို Phase အလိုက်Plan ခွဲခြင်း၊ Estimateတွက်ချက်ခြင်းများနှင့် တာဝန်ပေးထားသော Project များအား စီမံခန့်ခွဲနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ – Operation ပိုင်း Technical ပိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ရမည်။ – Material အသစ်တွေကို လေ့လာနိုင်ရမည် – ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပြေပြစ်၍သွက်လက်တက်ကြွသူဖြစ်ရပါမည်။
၁။ Estimate တွက်ချက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ၂။ လမ်း၊တံတား Project များ တွက်ချက်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ ၃။ Budget Control/ Material Control လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ၄။ Autocad 2D/3D ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။ ၅။ အစိုးရတင်ဒါ နှင့် တီကော်တင်ခြင်းများလုပ်ကိုင်ဘူးသူဖြစ်မည်။ ၆။ ကုမ္ပဏီရှိ Project များအားတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်သူ နယ်သွားနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ၇။ Project တိုးတက်မှုသည်သက်မှတ်ထားသော အချိန်ဇယားအတိုင်း ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ လိုအပ်သလိုလိုက်လံဆောင်ရွက်ကာ Quality အရည်အသွေးပြည့်မီမှုရှိမရှိ ပမဏအား စစ်ဆေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
• အသားငါးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုကောင်းမွန်စွာစီမံနိုင်ရမည်။ • ကိုယ်ပိုင်ဟင်းပွဲများဖန်တီးနိုင်ရမည်။ • အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ • ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ရမည်။
- လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၂) နှစ်ရှိရမည်။ - ကြိုးစားသင်ယူလိုစိတ်ရှိရမည်။
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူကို ဦးစားပေးမည် လုပ်ငန်းခွင်ရှိ အခက်အခဲများအား ဖြေရှင်းနိုင်ရမည် *အဖွဲ့အစည်းဖြင့်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည် ။
အကျိုးအမြတ်: * အလုပ်အချိန် (9:00 AM – 5:30 PM) *Sunday နှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက် ပိတ်သည်
၁။ Construction လုပ်ငန်းတွင်လုပ်ကိုင်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ ၂။ နယ်ဆိုဒ်များတွင်သွားရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ၃။ ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် Operation အားစီမံခန့်ခွဲနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ၄။ အစိုးရရုံးများအားဝင်ထွက်သွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
- Excellent understanding of digital marketing concepts and best practices - Perfect knowledge of web analytics tools- Excellent communication and interpersonal skill
- Receptionist အတွေ့အကြုံအနည်းငယ်ရှိရမည်။ - Guest service ကောင်းမွန်ရမည်။ -Team oriented စိတ်ရှိပီး Obedience ဖြစ်ရမည်။ - Guest complain ဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - Personal Hygiene ကောင်းမွန်ရမည်။
ပိုက်ပြင်ဆရာ | Plumber
စျေး၀ယ်စင်တာနှင့်ဟော်တယ်အဆောက်အဦးများကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခဲ့ဖူးသောအတွေ့ အ ကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ စင်တာရှိပိုက်များကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၊မွမ်းမံပြုပြင်ခြင်းများကိုလုပ်ကိုင်ဖူးသောအတွေ့ကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအ တွေ့အကြုံ ၃ နှစ် မှ ၅ နှစ် ရှိသူဖြစ်ရမည်။
လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဝန်ထမ်း | Health and Safety Officer
-ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်မှာ ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းခွင်တွင် Occupational Health and Safety (OHS) guidelines များကို သေချာစွာလိုက်နာစေရမည်။ - Responsible for planning, implementing and overseeing company's employee safety at work . Their main duty is to ensure that the company is in complience and adheres to Occupational Health and Safety (OHS) guidelines.
အကျိုးအမြတ်: - ဘောနပ် - စားစရိတ် - ခရီးစာရိတ် - အချိန်ပိုကြေး - အခြားခံစားခွင့်
ဟိုတယ်မန်နေဂျာ | Hotel Manager
ဟိုတယ်တစ်ခုလုံး၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကောင်းမွန်နိုင်ရန် တာဝန်ယူနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည် ရှိရမည်
Export & Import Staff (Trading)
Myint Myat Htut Khaung International Co.,ltd
- Export/ Import shipping စာရွက်စာတမ်းအမျိုးအစားအားလုံးကို စီစစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ - Third Partyများ သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။ - Shipmentများအား နောက်ဆုံးdestinationအထိ ခြေရာခံခြင်းfollow upလိုက်ခြင်းများပြုလုပ်ရမည်။ - Export Import စာရွက်စာတမ်းများကို မြန်မာဘာသာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဖြင့်လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ရမည်။ - Monitoring in Import Shipment. - Monitoring in Daily Urgent Parts. - Controlling in Export /Import Activity. - Other duties assigned by Superior Officer.
လက်သမား အတတ်ပညာ ကျွမ်းကျင် (1 ) ဦး
လက်သမား | Carpenter
စျေး၀ယ်စင်တာနှင့်ဟော်တယ်အဆောက်အဦးများကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခဲ့ဖူးသော အတွေ့ အ ကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ တံခါးများကိုပြုပြင်ခြင်း၊ ပရိဘောဂများကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊partition များဖြုတ်/တပ်ခြင်း အတွေ့အ ကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ ၃ နှစ် မှ ၅ နှစ် ရှိသူဖြစ်ရမည်။
Support Department Head, Sales & Marketing team and Operation Team Process paper work, documentation, invoice and quotation preparation Handling and communicating with related departments for stock report, products sample Maintain accurate computer and manual filing system Prepare Daily and Monthly reports (Related tasks) Complete Other tasks assigned by Department Head
အကျိုးအမြတ်: Office Uniform, Accommodation,Phone Card and Bill
• တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူ (သို့) အခြေခံအထက်တန်းအဆင့်အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ • အသက်(၂၂ မှ ၃၅) နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ • သက်ဆိုင်ရာ position နှင့်လုပ်သက်အနည်းဆုံး(၁)နှစ်အထက်ရှိရမည်။ • M&E Maintenance ပိုင်းနားလည်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။ • Team work ကောင်းမွန်ရမည်။ • Day Shift, Night Shift ဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • မန်းလေးမြို့နယ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: Uniform+ Yearly Bonus+ Other Allowancesရမည်။
•မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာနှင့် အဆောက်အဦပရောဂျက်ကို စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း • ရေမြောင်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ အုတ်မြစ်ချခြင်း၊ C&S လုပ်ငန်းများအားလုံးနှင့် အထပ်မြင့်အဆောက် အအုံများအကြောင်း ကျွမ်းကျင်ရမည်။ • ကုမ္ပဏီမှဆောင်ရွက်သော ဆောက်လုပ်ရေးပရောဂျက်များကို ရေးဆွဲခြင်း၊ ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့် နေ့စဥ်လုပ်ဆောင်ခြင်း။ • လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် ဆပ်ကန်ထရိုက်တာများနှင့် အတိုင်ပင်ခံများနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။ • အချိန်ဇယားအတိုင်း ပရောဂျက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပေးပို့ရန် သေချာပါစေ။ • အစီရင်ခံခြင်းရည်ရွယ်ချက်နှင့် အစီရင်ခံစာတင်သွင်းခြင်းအတွက် ပရောဂျက်မှတ်တမ်းများကို အပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်း။ • ဆိုက်အစည်းအဝေးများကိုတက်ရောက်ပြီး နည်းပညာ/လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို လွတ်လပ်စွာဖြေရှင်းပါ။ • ပရောဂျက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် အထူးတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ပါ။